၁၈၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးကို ပထမ ပီဒရို ဧကရာဇ်မှ ကြေငြာခဲ့ပုံ
ပေါ်တူဂီ စစ်တပ်မှ နပိုလီယံ၏ ကျူးကျော်မှုကို အောင်မြင်စွာ တွန်းလှန်ပြီးသည့် နောက် ဆဌမမြောက် ရှဝေါင်ဘုရင် (King João VI) သည် ဥရောပသို့ ပြန်သွားခဲ့ပြီး သူ၏ အကြီးဆုံးသားဖြစ်သူ ပီဒရို ဒီ အယ်လ်ကန်ထရာကို ဘရာဇီးကို အုပ်ချုပ်မည့် ဘုရင်ခံ အဖြစ် ခန့်ထားခဲ့သည်။  ၁၈၂၀ လစ်ဘရယ် တော်လှန်ရေးကြောင့် ဖြစ်လာသည့် ပေါ်တူဂီ အစိုးရက ဘရာဇီးနိုင်ငံအား ကိုလိုနီ အဖြစ် တဖန်ပြန်၍ ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ပြီး ၁၈၀၈ ခုနှစ်မှ စတင်ရရှိခဲ့သည် အောင်မြင်မှုများကို ပြန်လည်ဆုံးရှုံးမည့် အခြေအနေဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘရာဇီးများက ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းကို လက်မခံဘဲ ပီဒရိုမင်းသားမှလည်း ဘရာဇီးပြည်သူများ ဘက်မှ ရပ်ကာ ၁၈၂၂ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်တွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးကို ကြေငြာခဲ့သည်။ ၁၈၂၂ အောက်တိုဘာ ၁၂တွင် ပီဒရိုသည် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ဧကရာဇ် အဖြစ် ကြေငြာခဲ့ပြီး ၁၈၂၂ ဒီဇင်ဘာ ၁ရက်တွင် ပထမ ဒွန်ပီဒရိုဘုရင် အဖြစ် ဘိသိက်ခံခဲ့သည်။
နိုင်ငံတဝှမ်းရှိ မြူနီစပါယ် ကောင်စီများ၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ၁၈၂၄ ခုနှစ် မတ်လ ၂၅ ရက်တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။ ပထမ ပီဒရိုဘုရင်သည် ၁၈၃၁ ဧပြီလ ၇ ရက်တွင် နန်းစွန့်ကာ သူ၏ သမီးထံမှ ထီးနန်းကို ပြန်လည်ရယူရန် အတွက် ဥရောပသို့ ပြန်သွားခဲ့သည်။ သူ၏ ၅ နှစ် အရွယ် သားဖြစ်သူ ဒုတိယ ပီဒရိုဘုရင် ဖြစ်လာမည့် သူအား ချန်ထားခဲ့သည်။ ဘုရင်အသစ်မှာ အရွယ်မရောက်သေးသဖြင့် နိုင်ငံကို မအုပ်ချုပ်နိုင်သေးသည့် အတွက် ဘုရင်ခံ တစ်ဦးကို ခန့်ထားခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေး အဖွဲ့ကွဲများမှ သူပုန်ထမှုများနှင့် မငြိမ်သက်မှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး မင်းမဲ့တိုင်းပြည် ဖြစ်လုနီးပါးပင် ဖြစ်သည်။ ဂရော-ပါရာ (Grão-Pará) ဒေသမှ လူဦးရေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိသည် ကာဘာနာဂမ် ထကြွမှုတွင် သေဆုံးခဲ့ရသည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ အချို့သော သူများမှာ ပီဒရို ၂ အရွယ်မရောက်သေးသရွေ့ သူတို့၏ ဒေသအား လွတ်လပ်သော သမ္မတနိုင်ငံ များအဖြစ် ခွဲထွက်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သော်လည်း ဘုရင်ကို တော်လှန်ပုန်ကုန်ခြင်း မဟုတ်ကြပေ။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဒုတိယ ပီဒရိုဘုရင်အား အရွယ်မရောက်မီတွင် ဧကရာဇ် အဖြစ် ကြေငြာခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် ဘရာဇီးနိုင်ငံသည် ရာစုနှစ်ဝက်ခန့်မျှ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလျင်အမြန် တိုးတက်ခြင်းတို့ဖြင့် တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။
စစ်အစိုးရမှ အာဏာ အလွှဲအပြောင်းကြား ကာလတွင် ခေတ္တမျှ ထိန်းသိမ်းရန် ဖြစ်သော်လည်း  တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီး ၁၉၆၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက် ကို ကြေငြာကာ အာဏာရှင်စနစ်သို့ အပြည့်အဝ ပြောင်းလဲသွားခဲ့လေသည်။  အာဏာရှင် စနစ်ကို ဆန့်ကျင်သူ မြို့ပြနေ ပြောက်ကျားများကို  နှိပ်ကွပ်ရာတွင် ကြမ်းတမ်းသော်လည်း အခြားသော လက်တင် အမေရိက တိုင်းပြည်များလောက် မဆိုးရွားခဲ့ပေ။  "အီကော်နောမစ် မစ်ရကယ်" ဟုခေါ်သော မကြုံဖူးလောက်အောင် ထူးခြားစွာ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုများကြောင့် ဖိနှိပ်ထားသည့် ခုနှစ် အတွင်းမှာပင် စစ်အစိုးရကို လူကြိုက်များလာခဲ့သည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံသည် တောင်အမေရိကတိုက်၏ အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်း နေရာများစွာ ပါဝင်ပြီး တိုက်ကြီး၏ အတွင်းပိုင်း နေရာ အတော်များများလည်း ပါဝင်သည်။ တောင်ဘက်တွင် ဥရုဂွေးနိုင်ငံ ၊ အနောက်တောင်ဘက်တွင် အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ နှင့် ပါရာဂွေးနိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်တွင် ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ နှင့် ပီရူးနိုင်ငံ၊ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ၊ မြောက်ဘက်တွင် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၊ ဆူရာနမ်နိုင်ငံ၊ ဂိုင်ယာနာနိုင်ငံ နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ ရပ်ဝေးနယ်နိမိတ် ဖြစ်သော ပြင်သစ်ဂီနီ တို့ဖြင့် ကုန်းမြေနယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျှက် ရှိသည်။ အီကွေဒေါနိုင်ငံ နှင့် ချီလီနိုင်ငံ တို့မှ လွဲ၍ တောင်အမေရိကရှိ နိုင်ငံအားလုံးနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျှက် ရှိသည်။ ထိုမျှသာမက သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ ကျွန်းများဖြစ်သည့် ဖာနန်ဒို ဒီ နိုရွန်ဟာ ကျွန်း၊ ရိုးကပ်စ် သန္တာကျွန်း၊ စိန့်ပီတာနှင့် စိန်ပေါကျွန်း၊ ထရီနီဒတ် နှင့် မာတင် ဗက်စ် ကျွန်း များလည်း ပါဝင်သည်။ ၎င်း၏ အရွယ်အစား၊ မြေအနိမ့်အမြင့် အမျိုးမျိုး တည်ရှိမှု၊ ရာသီဥတု နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ်များကြောင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံသည် ပထဝီ အနေအထား အမျိုးမျိုး အစားစား ရှိသည်။ အတ္တလန္တိတ်ရှိ ကျွန်းများ အပါအဝင် ဘရာဇီးနိုင်ငံသည် မြောက်လတ္တီကျု ၆ ဒီဂရီ နှင့် တောင်လတ္တီကျု ၃၄ ဒီဂရီ အကြား၊ အနောက်လောင်ဂျီကျု ၂၈ ဒီဂရီ နှင့် ၇၄ ဒီဂရီ အကြားတွင် တည်ရှိသည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ မြေမျက်နှာပြင်မှာလည်း အမျိုးမျိုးအစားအစား ကွဲပြားပြီး တောင်များ၊ တောင်ကုန်းများ၊ လွင်ပြင်များ၊ ကုန်းပြင်မြင့်များ နှင့် ဆူးချုံတော မြေပြင်များ ပါဝင်သည်။ ကုန်းမြေ နေရာ အတော်များများမှာ ၆၆၀ပေ ( ၂၀၀ မီတာ) မှ ၂၆၀၀ပေ (၈၀၀ မီတာ) အမြင့်တွင် တည်ရှိသည်။  နိုင်ငံ၏ တောင်ဘက်ပိုင်းအခြမ်း နေရာဒေသ အတော်များများမှာ အမြင့်ပိုင်း ဒေသ ဖြစ်သည်။ ကုန်းပြင်မြင့် ဒေသ၏ အနောက်မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာ မြေနိမ့်ပိုင်း တောင်ကုန်းဝိုင်းများကြောင့် ကျိုးပြတ်လျှက်ရှိသော ကျယ်ပြန့်ပြီး နိမ့်မြင့်တက်ကျရှိသော မြေမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။
IGBE: Instituto Brasileiro de GeografiaeEstatística. Retrieved2January 2019.
Brazil။ International Monetary Fund။ 2010-04-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Desigualdadeepobreza continuaram caindo no Brasil mesmo com crise, revela Ipea — Agência Brasil – EBC။ Agenciabrasil.gov.br။ 2009-10-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
UNDP Human Development Report 2009။ Table H: Human development index 2007 and its components (PDF)။ UNDP။ 2009-10-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Hora Legal Brasileira။ Observatório Nacional။ 22 July 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-02-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Geography of Brazil။ Central Intelligence Agency (2008)။ 2008-06-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
People of Brazil။ Central Intelligence Agency (2008)။ 2008-06-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Introduction of Brazil။ Central Intelligence Agency (2008)။ 2008-06-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
CIA – The World Factbook – Country Comparisons – GDP (purchasing power parity)။ Cia.gov။ 25 January 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Boxer, pp. 100–101.
Skidmore, pp. 32–33.
Hendrik Kraay apud Lorenzo Aldé, Revista de História da Biblioteca Nacional, issue 50, year5(Rio de Janeiro: SABIN, 2009), p. 20
Sérgio Buarque de Holanda, O Brasil Monárquico: o processo de emancipação, 4th ed. (São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1976), p. 403
Gaspari, A Ditadura Envergonhada, p. 35.
Elio Gaspari, A ditadura escancarada (São Paulo: Companhia das Letras, 2002), p. 193.
Gaspari, A Ditadura Envergonhada, pp. 35–36.
Brazil elects Dilma Rousseff, nation's first woman president။ CNN (2010-10-31)။ 19 July 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2011-08-08 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Land and Resources"။ Encarta။ MSN။ 31 October 2009 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-06-11 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (အကူအညီ)
Official Area (In Portuguese) IBGE: Instituto Brasileiro de GeografiaeEstatística. Retrieved 2010-01-08.
"Natural Regions"။ Encarta။ MSN။ 31 October 2009 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-06-11 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (အကူအညီ)
"Rivers and Lakes"။ Encarta။ MSN။ 31 October 2009 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-06-11 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (အကူအညီ)